Kukwidziridzwa Kwemitezo Kunounza Kwauri 2013 Treadmill Kutengesa kubva kuSmooth Fitness
Sevha $ 1000 pane iyo Smooth 5.65 Treadmill
Mutengo wakajairika wekutengesa i $ 1999… nekutengesa uku unobhadhara chete $ 999 !!!
Kana mari iri pasi, pane pamwedzi yekubhadhara sarudzo ye $ 39 / mwedzi
Iyo Smooth 5.65 ine SmoothSound ™ odhiyo sisitimu. Iwe unogona kunamatira yako iPod / MP3 player kune yekubatsira yekuisa jack uye teerera kumimhanzi yako yaunofarira kuburikidza neyevatauri vekutsika
Iko kune 3 hwindo LED skrini ine LCD Dot Matrix. Iyi kuratidza inoratidza nguva, kureba, kumhanya, kurerekera, kurova kwemoyo, & macalorie
The Smooth 5.65 ine 2.75 inoenderera bhiza simba mota iri kuvaka kwehupenyu hwakareba. Iyo ine yepamusoro Pulse Width Modulation (PWM) redunhu bhodhi iyo inowanzo kuwanikwa pamabhizimusi ekutsika-tsika. Iyo mota 5.65 inoshanda isina ruzha
Iyi treadmill ine gumi nemaviri mapurogiramu ekudzidzira:
- 1 Chinyorwa chirongwa
- 12 kumhanya / kurerekera zvirongwa
- 1 chirongwa chemafuta.
Iyi treadmill inotsvedzerera ine 2 mabhodhoro emvura uye yekuverengera yakasanganiswa yekuverenga inova yakanaka kubhuku kana kunyangwe yako iPad kana Kindle chishandiso. Iko kune kuvaka mu fan zvakare izvo zvinobatsira kutonhodza iwe pasi panguva yako yekurovedza muviri.
Iyo Smooth 5.65 ine dhidhiyo yakajeka yekururamisa - Iwe garandi yeupenyu pane iyo furemu, makore mashanu pazvikamu, uye makore maviri pabasa.